कोशी अनलाइन बुधबार, २४ माघ, २०७४ मा प्रकाशित
मोरङ, माघ २४
विध्यार्थी गिलो माटोजस्तै हुन् । उनीहरूलाई शिक्षकले जे सिकायो, त्यही सिक्छन् । तर रंगेलीमा अवस्थित पब्लिक माविका विध्यार्थीले विध्यालय पोसाकमै तास खेल्दासमेत शिक्षकले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।स्थानीय वीरेन्द्र महतोका अनुसार विध्यालयका शिक्षकहरूलाई विध्यालय अवधिभर कुन विध्यार्थी कहाँ जान्छ र के गर्छ भन्ने पत्तो हुँदैन । करिब ६ सय विध्यार्थीको हेरविचार २० जना शिक्षकले गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।
विध्यालयका प्रधानाध्यापक वीरेन्द्र साह भारत गएका छन् । यस विषयमा कुरा बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । रंगेली क्षेत्रका गाउँ-घर वा विध्यालय आसपासका पसलेहरूले आफ्नो पसलमा मनोरन्जनका लागि क्यारमबोर्ड राखेका छन् । यो तस्बिर हेर्नुस् त, विध्यालयमा पढ्न आएका विध्यार्थीले क्यारमबोर्डमै कल ब्रेक भन्ने खेल खेलिरहेका छन् । यो खेल बिनातास सम्भव हुँदैन । तर, विध्यालय जानका लागि कलम र कापी समाएका विध्यार्थीलाई विध्यालयको छेउमै तास खेल्ने व्यवसाय सन्चालन गरेर पढाइबाट बन्चित गर्नु कति उचित होला ? यो घटना उक्त विध्यालय आसपासमा विध्यालय लागेकै बेलामा दिनहुँ हुने गरेको छ ।
यो घटना मोरङको रंगेलीमा गत मंगलबार दिउँसो २ बजे विध्यालय पोसाकमा रहेका विध्यार्थीहरू क्यारमबोर्डमा तास खेलिरहेका थिए । उनीहरूको हातमा तास थियोे भने बोर्डमा गोटिहरु देखिन्थे । कसरी खेलिन्छ त क्यारमबोर्डमा तास ? पसलेहरूले क्यारमबोर्डको गोतिमा १९ वटा गोटिमध्ये १३ वटा गोटिमा एकदेखि १३ सम्मको अङ्क लेखेर टाँसेका हुन्छन् । पसलेहरूले तासमा रहेको गुलामलाई ११ नम्बर लाई संङकेत दिएका हुन्छन् र क्रमशः १२ लाई मिस्सि, १३ र बास्सा लाई १४ नम्बरको संङकेत दिएका हुन्छन् ।
सोहीअनुरुप पसलेहरूले बालबालिकालाई क्यारमबोर्ड खेल्न आउँदा ताससमेत दिएर खुलेआम सडक किनारामा बालबालिकालाई तास खेलाइरहेका हुन्छन् । यस विषयमा प्रहरी प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित निकायले पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्, बरु उनीहरू देखेको घटना पनि नदेखेको अभिनय गरिरहेका छन् । घरबाट अभिभावकले छोराछोरीलाई विध्यालय पठाउने गरे पनि आफ्ना बालबालिका के गरिरहेका छन् भन्नेबारे अविभावकसमेत बेखबर रहेको पाइन्छ ।